Myat Shu - အနုပညာသတင်း
You are here : Myat Shu » Archives for အနုပညာသတင်း
Published By Myat Shu On Sunday, August 21st 2011. Under အမှတ်တရ, အနုပညာသတင်း
ဘ၀အဓိပ္ပာယ်နှင့် ဘ၀သစ္စာ၊ အတွေးအခေါ်တို့ လွင့်မျောခြင်းနျင့် လူ၏ တည်ဆောက်ရာ၊ စီးပွားရေးနှင့် စစ်ရေးဗျူဟာ၊ မှန်သော စကားကိုဆိုခြင်းစသည့် စာအုပ်တို့ဖြင့် ထင်ရှားကျော်ကြားသူ စာရေးဆရာကြီး နန္ဒာသိန်းဇံ (ပါမောက္ခ ဒေါက်တာသိန်းဇံ (ဒဿနိကဗေဒ) အသက် ၆၅ နှစ်) ကွယ်လွန်ကြောင်း ကြားသိရသည့်အတွက် မိသားစုနှင့် ထပ်တူ ကြေကွဲဝမ်းနည်းမိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။ ဦးဇော်မြင့် (ရီမြင့်ရုပ်ရှင်)နှင့် ဇနီးဒေါ်ရီရီထွေးတို့၏ မိခင် ဒေါ်ကြင်ကြင် (အသက် ၈၆ နှစ်) သည် သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ကွယ်လွန်သွားသည်ကို ကြားသိရသည့်အတွက် မိသားစုနှင့် ထပ်တူ ၀မ်းနည်းကြေကွဲကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။ မန္တလေးအလင်း သတင်းဂျာနယ် ... Continue Reading
အနုပညာမိသားစုနဲ့ မန္တလေးမှာ မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ ထာဝရ အလင်းတန်း
Published By Myat Shu On Monday, July 25th 2011. Under အနုပညာသတင်း
ရီမြင့်ရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိရေး၊ ၀တ္ထု - ကာတွန်းမိုးကြိုး၊ ဇာတ်ညွှန်း - မြင့်ဆောင်၊ စိုးကျော်ဆန်း၊ ဒါရိုက်တာ ထွန်းအောင်ဇော် ရိုက်ကူးပြီး နောင်နောင်၊ လူမင်း၊ မယ်လိုဒီ၊ မော့စ်နဲ့ ဇာတ်ပို့ ဇာတ်ရံများစွာ အားဖြည့် ပါဝင်ထားတဲ့ “ထာဝရအလင်းတန်း” ရုပ်ရှင်ကားကြီးကို မန္တလေးမြို့ရှိ အနုပညာ မိသားစုများနဲ့ မိတ်ဆက်ပြသပွဲကို ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်က မန္တလေးမြို့မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ ကိုယ်ကျိုးမဖက်ဘဲ စွမ်းနိုင်သမျှ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ကျောင်းဆရာ စောကျော်အေးအဖြစ် နောင်နောင်၊ မဟုတ်မခံ လူဖြောင့် စိတ်တိုဖြစ်သော်ငြား ကျေးရွာ အကျိုးအတွက် ထာဝရ အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ ချက်ကြီးအဖြစ် လူမင်း၊ အစ်ကိုရဲ့ ... Continue Reading
ပရိသတ်က ခိုးကူးပဲ အားပေးချင်တယ်ဆိုတဲ့ သားစိုး
ရောသမမွှေသားစိုးက ဒီဘက်နှစ်ပိုင်းမှာ အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ထူထောင်ဖို့ ကြိုးစားလာခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့် စီးပွားရေးတွေ လုပ်ဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့အကြောင်း သားစိုက ယခုလို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ အဆိုတော် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်ဖို့ မလွယ်တဲ့အခါ မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာ လိုက်ဆိုမလား။ ဒါလည်း မလုပ်ချင်ဘူး။ ထမင်းစားဖို့ လိုလာတယ်လေ။ အခွေတွေရဲ့ ရောင်းအားလည်း ကျနေတဲ့ ကာလဖြစ်တယ်။ အရင်နှစ်က တစ်ခွေထွက်ရင် သုံးထောင်ကနေ ငါးထောင် ရောင်းအားရှိတယ်။ အရင်းပြန်ရသေးတယ်။ အခုကျတော့ အဲဒီလောက်တောင် မရောင်းရတော့ဘူး။ ပေါက်တယ်ဆိုတဲ့ အခွေတစ်ခွေမှာ နှစ်ထောင် သုံးထောင်လောက်ပါပဲ။ ထွက်သမျှ အခွေတွေ အကုန်လုံးက ပက်ပက်စက်စက် ရှုံးတာချည်းပဲ။ ထွက်ပေမယ့်လည်း အနုပညာအရ အရည်အသွေး မြင့်မားတဲ့ အခွေ မတွေ့ရဘူး။ အနည်းငယ်လောက်ပဲ ... Continue Reading
သီချင်းတွေနဲ့ အလွမ်းပြေစရာ အမေရိကား ဖျော်ဖြေပွဲ
Published By Myat Shu On Friday, July 1st 2011. Under အနုပညာသတင်း
(လော့စ်အိန်ဂျလိ ဖျော်ဖြေပွဲမှ စိုးသူ) အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာ New Strength Foundation လူမှုရေးအဖွဲ့က လူမှုရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ရံပုံငွေမြှင့်တင်ရန် တေးဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုကို ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့က လော့စ်အိန်ဂျလိမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဖျော်ဖြေသွားတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံရောက် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်နဲ့ အဆိုတော် စိုးသူ၊ အဆိုတော် အေးချမ်းမေနဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ အဆိုတော် ဒီလွန်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ည (၇) နာရီကနေ (၁၁) နာရီအထိ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဒီပွဲမှာ ပရိသတ် (၃၀၀) ကျော် လာရောက် အားပေးပြီး စိုးသူက မိုးရွာသောနေ့ “အသက်ရှင်ခြင်း၊ ဖက်ထားလိုက်၊ အဖြူရောင် ရော့ခ်အင်ရိုး၊ ... Continue Reading
ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးမှာ ကြီးလာတဲ့ သူတွေလို့ပြောတဲ့ လေးဖြူ၊ လင်းလင်းရဲ့ စဉ်းစားပါ ဒီဗီဒီ ကြည့်ရင်း မန္တလေးကို တော်တော်လွမ်းသွားသည်ဟု ဆိုခြင်း
Published By Myat Shu On Monday, March 7th 2011. Under အနုပညာသတင်း
အေးမွန် စာနယ်ဇင်း ပရိုမိုးရှင်းတွေမှာ မတွေ့ရသလောက်ဖြစ်တဲ့ မီဒီယာ စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ မြင်ရခဲတဲ့ အင်တာဗျူးတွေ မဖြေဘူးလို့ သတင်းကြီးတဲ့ လေးဖြူကို လင်းလင်းရဲ့ စဉ်းစားပါ ဒီဗီဒီ မိတ်ဆက်ပွဲမှာ တွေ့ရပါတယ်။ အမှတ်တရစကားရှည်ရှည်ဝေးဝေး အသေအချာပြောပေး ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ လင်းလင်းအတွက် အမှတ်တရ စကားပြောပေးဖြစ်ခဲ့ပုံနဲ့ ပတ်သက်လို့ လေးဖြူက ခုလိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ “မနေ့ရှေ့တစ်နေ့လောက် လင်းလင်းက သူ့အခွေလေးထွက်မယ်။ ထွက်လို့ရှိရင် အထပ်နှစ်ဆယ်မှာ စကားလေးပြောပါတဲ့။ ဒီအခွေထွက်ရှိရေးအတွက် တီးခတ်မှုပိုင်းမှာ ရိုက်ကူးရေး ကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့ Metal Zone ၀ိုင်းတော်သားများရဲ့ ကိုယ်စား ကိုဇော်လတ်က ပြောပါမယ်တဲ့။ ဒုတိယအနေနဲ့ သီချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး လင်းလင်းက ပြောပါမယ်တဲ့။ ရိုက်ထားတာလေးကိုကြညြ့်ပီး စကားပြောပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ တော်တော် ... Continue Reading